ग्रह/राशि अनुसार तपाईंको आजको दिन कस्तो रहला? हेर्नुहोस् आज शुक्रबारको राशिफल
May 8, 2020 1269
कुनै महत्त्वपूर्ण काम छ भने दिनको पूर्वाद्र्ध’भित्रै सिद्ध्याउनु राम्रो हुनेछ । बन्द’व्यापारमा राम्रै देखिन्छ, हाँकेका र ताकेका काममा ढिलासुस्ती हुनसक्छ । सुरुमा साथीभा’इको सहयोग मिल्ने देखिन्छ तर पछि आफू एक्लै खटेर काम पूरा गर्न सकिने छ । दिउँसो चन्द्र’माले आठौं भावमा प्रवेश गर्ने भएकाले मनमा विरक्तिका भावना सञ्चरण हुन सक्छन् ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ७ र शुभरङ्ग : नीलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्यसिद्धि मन्त्र : ॐ मृत्युञ्जयाय नमः न्यूनतम जापस’ङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बिहान गरेका काममा ढिलोमात्र सफलता प्राप्त हुनेछ । बेलुकीपख मनमा हर्ष, आनन्द र प्रसन्नता’को सञ्चार हुनेछ, विला’सिताका भावनाहरू जागृत हुनेछन् । मावली, ससुराली वा कुनै मित्रको निम्तोमा सहभागी भइने छ । निर्णय क्षमताको प्रशंसा हुनेछ । प्रेम तथा प्रणय’प्रसङ्गका लागि अनुकूल समय छ, दाम्पत्य जीवन असल हुनेछ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ७ र शुभरङ्ग : सेतो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य:सिद्धि मन्त्र : ॐ कुलदेव्यै नमः न्यूनतम जापसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सुरुमा पाँचौं चन्द्रमाले ज्ञान’विज्ञान, अध्यात्म र दर्शन’तर्फ आकर्षण बढाउने छ । बौद्धिक र चिन्तनमूलक काममा दिन गएको पत्तो पाउनुहुन्न । छोरा’छोरीबाट सन्तोष प्राप्त हुनेछ । इष्ट’मित्रले प्रशंसा गर्नेछन् । विवाद सामञ्जस्यका लागि तपाईंको अहम् भूमिका रहने छ । आफुलाई प्रतिष्ठा प्राप्त हुनेछ र बन्धुवान्धव र साथी’भाइले सहयोग पुर्याउने छन् ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ३ र शुभरङ्ग : रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ नागदेवताभ्यो नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : ०९ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
प्रातःकालमा एक्लोपन र निराशा बढ्नाले मन एक’तमासको हुनेछ । तर मूलतः आज बौद्धिक, साहित्यिक र सिर्ज’नात्मक क्षेत्रमा समय र धन लगानी गर्ने समय छ । त्यसैले बौद्धिक क्रिया’कलाप, दर्शन र चिन्तनप्रति जसरी भए’पनि समय निकाल्न सके राम्रो हुन्छ । हुन त बौद्धिक क्षमता राम्रो रहने छ । तत्काल योजना कार्यान्वयन गर्न कठिनाइ हुनेछ ।
आजका लागि शुभअङ्क : ९ र शुभरङ्ग : पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रा’मा जानु अघि आज कार्य:सिद्धि मन्त्र : ॐ वाग्देव्यै नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
शरीरमा आलस्यले डेरा जमाउने छ । मानसिक तनाव र उल्झन’लाई झेल्नु’पर्ने छ । महत्वाकाङ्क्षी योजना कार्यान्वयन गर्दै हुनुहुन्छ भने गोप्य राखेमा मात्र सफलता पाउनु’हुनेछ । कुनै महत्त्व’पूर्ण काम बन्ने सम्भावना पनि छ, तर आज दिन’भरि चौथो घरमा चन्द्रमा रहने भएकाले कुनै नयाँ काममा हात हाल्नु श्रेयस्कर हुँदैन ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ४ र शुभरङ्ग : घिउ रङ हो भने कुनै शुभ’कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ सों सोमाय नम न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
मानप्रतिष्ठा र सामा’जिक मर्यादामा अभिवृद्धि हुनेछ । विशिष्ट व्यक्ति’को सहयोग र सल्लाहले महत्व’पूर्ण कार्य सम्पन्न हुनेछ । परोपकार र दानपुण्यका क्षेत्रमा मन जानेछ । दाजु’भाइ र बन्धुबान्धवको सल्लाहले रोकिएको काम बन्न सक्छ । धार्मिक र सामा’जिक काममा समय बित्नेछ । आध्यात्मिक भावनाको विका’स हुनेछ । सानो प्रयासले भाग्योन्नतिको अवसर आउने छ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ८ र शुभरङ्ग : रातो हो भने कुनै शुभ’कर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ धरणीसुताय नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आर्थिक पक्षमा उल्लेखनीय लाभ प्राप्त हुनेछ । स्वादिष्ट व्यञ्जन प्राप्त हुने योग छ । स्वास्थ्य’पक्षमा राम्रो सङ्केत छ । बोलीमा मिठास आउने छ । हर्ष र प्रसन्नता’का बीचमा समय व्यतीत हुनेछ । परिवारमा मेल’मिलापको वातावरण का’यम हुनेछ । मित्र र सहयोगी असाध्यै सहायक सिद्ध हुनेछन् । आर्थिक लाभ प्राप्त हुनेछ । हातमा अचानक सोच्दै न’सोचेको धन प्राप्त हुनसक्छ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ५ र शुभरङ्ग : पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ महालक्ष्म्यै नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
मनमा देखिएका निराशा र खिन्नता क्रमशः हट्दै जानेछ । बिहान मि’श्रित प्रभाव प्राप्त हुनेछ । दुःखसुख, आयव्यय, सफलता–अस’फलता उस्तैउस्तै होला । नयाँ व्यापार वा व्यवसाय:तर्फ मन आकर्षित हुनेछ । आफूले ताके’अनुरूप तुरुन्त काम नबने पनि अन्त्यमा सफलता प्राप्त गर्नु हुनेछ । दिन ढल्दै जाँदा निर्णय सार्थक हुनेछ । मित्र’वर्गबाट सोचे’जस्तो लाभ प्राप्त हुनेछ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : १ र शुभरङ्ग : रातो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ गं गणपतये नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
बिहानको समय असल छ, दर्शन र अध्यात्म’तर्फ लाग्न प्रेरणा प्राप्त हुनेछ । दिन छिप्पिदै जाँदा मनमा वैराग्य र निराशाका भावना सञ्चरण हुनसक्छन् । तर्क, वहस र वाद’विवादमा विजय प्राप्त हुनेछ । परो’पकारका क्षेत्रमा आक’र्षण बढ्ने छ । दुरदराजमा रहेका आफन्तजनसँग सम्बन्ध कायम हुनेछ । दानपुण्य वा परोपकारका क्षेत्रमा लगानीको समय छ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ७ र शुभरङ्ग : नीलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ शं शनैश्चराय नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : २३ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
सरकार र राज्यपक्ष’बाट लाभ प्राप्त हुनेछ । रोकिएका सरका’री काम सुल्झाउने राम्रो समय छ । साथीभाइबाट सहयोग जुटाउन सकिने छ । उत्साहमा बृद्धि हुनेछ । उद्योग’धन्दा र बन्द’व्यापारमा फाइदा हुनेछ । आम्दानीका प्रयास सफल हुनेछन् । प्रतिस्पर्र्धीहरू परास्त हुनेछन् । सामाजिक क्षेत्र”बाट प्रशंसा, सम्मान र सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ५ र शुभरङ्ग : बैजनी वा पहेंलो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ कुलदेवताभ्यो नमः न्यूनतम जा’पसङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
कल्पना, भावना, प्रेमसम्बन्ध र दाम्पत्य जीवनका लागि अनुकूल समय देखिंदैन । सानातिना र झिना’मसिना काममा तल्लीन हुनुपर्ने भएका’ले सामान्यतया दिन बितेको पत्तो पाइँदैन, तर सोचेजस्तो लाभ प्राप्त गर्न अनुभवीको राय लिनु पर्नेछ, अनिमात्र व्यव’सायिक र सामाजिक क्षेत्रमा खटेजति सफ’लता प्राप्त हुनेछ । बेलुकाको वास वा खानपीनमा फेरबदल हुनसक्छ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ३ र शुभरङ्ग : हरियो हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रामा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ बुं बुधाय नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : २१ पटक जप गरी आ’रम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ ।
धार्मिक र सामाजिक क्षेत्रमा धनराशि खर्च गर्न मन हौसिने छ । मानसम्मान र प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न गरिएका प्रयास सफल हुनेछन् । बिगत’मा भएका कमी’कमजोरी सच्याउने मौका प्राप्त हुनेछ । परो’पकारी काममा खटिनु पर्ने भएकाले व्यव’सायिक गतिविधिमा असर पर्न सक्छ । भाग्यभावमा रहेको चन्द्रमा’लाई बलियो तुल्याउन आज दिनदुःखीलाई प्रसन्न तुल्याउनु पर्दछ ।
आजका लागि शुभ’अङ्क : ९ र शुभरङ्ग : गाढा पहेंलो वा केशरी हो भने कुनै शुभकर्म गर्नु पूर्व वा यात्रा’मा जानु अघि आज कार्य’सिद्धि मन्त्र : ॐ धर्मराजाय नमः न्यूनतम जाप’सङ्ख्या : ११ पटक जप गरी आरम्भ गर्दा लाभ प्राप्त हुनेछ । ज्यो- नारायण प्रसाद अधिकारी (साभार)
Prevबैँशमा यस्ता थिए अभिनेता दयाहाङ राई : हेर्नु`होस् पुराना ७ तस्बिरमा
Nextलकडाउन आंशिक खुकुलो, यी हुन् सञ्चालन गर्न पाइने व्यापार – व्यवसाय
इन्द्रेणीकि कल्पना दाहाल रुदै मिडियामा,मेरो जीवनको आज कालो दिन भन्दै यस्तोसम्म गरिन्…(भिडियो हेर्नु’स्)
मान्छेको भिड भएको बीच सडकमै यी वृद्धको सुरुवाल बाँदरले तानिदिएपछि..(भिडियो सहित)
भोलि लाग्ने सूर्य ग्रहणले कुन राशीलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ? हेर्नुहोस्…
१८ जना चढेको पिक-अप नदीमा खस्यो, ९ ला`श भेटिए ७ जनाको खोजी जारी
महिला ट्राफिक प्रहरीको यो रमाइलो टिकटक भाईरल, ४१ लाख बढीले हेरे (भिडियो सहित) (108361)
रोपाइँमा खिचिए यस्ता दृश्य, जुन बने टिकटकमा भाईरल (हे`र्नुस् भिडियो) (105227)
नङमा सेतो आकार हुनुको अर्थ यस्तो हुन्छ : पढ्नु’होस् (91228)
सुन्दर युवती र नेपाल आर्मीका सिपाहीको यो भाईरल भिडियो लाखौंले हेरे (भिडियो सहित) (89866)
बाबुको लास नउठ्दै ऋण असुल्न पुगेका साहुले छोरीको कुरा सुनेर उल्टै १५ लाख दिए ( हृदयस्पर्शी कहानी) (83510)
फिल्मी हिरो हिरोइनलाई टक्कर दिने नेपाल प्रहरीको यो डान्स (हे`र्नुहोस् भिडियो) (79831)
वर्षौ विदेश बसेर कमाउँदा पनि घरमा एक पैसा नरहेपछि श्रीमतीको कर्म थाहा पाउँदा श्रीमान अंगालो हालेर रोए (77468)
बिवाह पार्टी हुँदाहुँदै दुलाहाले दुलहीको तलको कपडा उचालेर भित्र टाउको छिराएपछि (भिडियो सहित) (70546)
स्वेताका लागि बद्री पंगेनीले गाए यस्तो गीत,स्वेताले दिईन् धन्यवाद (भिडियो) (69614)
हेर्नु’होस् नेपाली सेनाको यस्तो क’ठोर …. जुन भिडियो संसारभरी भाइरल (भिडियो हेर्नु’होस्) (68711)
नेपालमै छ यस्तो अस्पताल जहाँ कोराेना टेस्टदेखि खाना तथा औषधिसम्म पाइन्छ निःशुल्क
सुनको मूल्य घट्यो, तोलाको कति पुग्यो ? हेर्नु`होस्